MSF: Waxaan daawaynay 127 qof Afar bari - BBC News Somali
MSF: Waxaan daawaynay 127 qof Afar bari
Image caption Dad ka barakacaya Muqdisho
Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn MSF ayaa sheegay inay 127 qof ku daweeyeen isbitaalka Dayniile tan iyo maalintii Isniintii, taasoo ah tiro aad u badan ee dhaaw ay daweeyaan ilaa iyo horraantii sanadkan. Magaaladan dagaalku burburiyay waxay aragtay dagaalii oo si weyn u sii xoogeystay tan iyo bilawgii toddobaadkan.
Dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn waxay wadaan sidii ay daawooyin kale iyo qalab caafimaad ugu diri lahaayeen isbitaalka si gacan loo siiyo kooxda dhakhaatiirta ee halkaas ka joogta. Dhakhtar saddexaad oo Soomaali ah ayaa lagu waday inuu maanta ku biiro kooxdaas, si uu gargaarka aadka loogu baahan yahay u siiyo kooxaha MSF ee goobtaasi ka shaqeynayay 24ka saac tan iyo maalintii Isniintii.
"shaqaalaheenna Soomaaliya jooga waxay daweynayaan dadka dagaallada ku soo dhaawacmay waxayna ku dadaalayaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahida weyn ee xagga caafimaadka ee xilligan aadka u nugul" ayuu sheegay Thiery Goffeau, oo ah madaxa hawl galka MSF. Waxaana uu intaas raaciyay inay ku tiirsan yihiin daawooyin dheeraad ah oo loo keenayo, ayna teendhooyin ka sameeyeen dibadda isbitaalka si ay u maareeyaan bukaanka faraha badan ee ku soo qulqulaya.
Dhaawacyada oo dhan waxay ahaayeen kuwo ka yimid qarax ama rasaas. Dadka waxaa gaaray dhaawacyo badan, oo ay ugu badan yihiin caloosha, qaarka dambe iyo xabadka. Ilaa iyo hadda 22 bukaan ah ayaa helay qalliin degdeg ah. Siddeed bukaanka ka mid ahaa waxay u dhinteen dhaawacyadoodii, kuwaas oo afar ka mid ah ay dhinteen isla markii isbitaalka la keenay.
"Waxaa mahad leh shaqada adag ee shaqaalaheenna Muqdisho, waan sii wadi karnaa inaan qalliin naf badbaadin ah siinno dadweynaha Soomaaliyeed inta dagaalkani uu ku socdo" ayuu sheegay Goffeau.